Blumhouse's 'Farshaxanka' reboot wuxuu duubay duubista - iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Blumhouse '' Farsamada '' Dib-u-soo-kabashada ayaa duubtay filim
Blumhouse '' Farsamada '' Dib-u-soo-kabashada ayaa duubtay filim
Blumhouse ayaa Farshaxanka reboot ayaa duubtay toogashada. Taasi waa sida laga soo xigtay cid kale oo aan ahayn Jason Blum laftiisa.
Markii wax laga waydiiyey Farshaxanka by TooFab.com, Blum wuxuu sheegay inuusan wali arkin filimka oo uusan waxba kala socon waqtigan. Wuxuu yiri waan arki doonaa labada ilaa seddex isbuuc ee soo socda.
Inkastoo Blum laga yaabo inuusan ogeyn waxa Farshaxanka reboot ayaa haysa, atariisho Michelle Monaghan waxay qaadatay Twitter-ka inyar oo gadaal ah waxayna leedahay tan ku saabsan ku lug lahaanshaheeda.
Waxaan dhihi lahaa reimagering. Zoe runti waa caqli badan yahay waxayna ahayd waqti aad u wanaagsan oo lagu jiray goobtaas. Spooky, laakiin sidoo kale runtii waqti ku habboon oo ku habboon marka la eego waxa ku saabsan iyo sida ay dib ugu fikirtay. Waana Blumhouse oo waxaan doonayay inaan la shaqeeyo Jason in muddo ah hadda sidaa darteed way fiicnayd in ugu dambayntii lala shaqeeyo.
Jilayaasha loogu talagalay Farshaxanka reboot waxaa kamid ah Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna, Nicholas Galitzine, Michelle Monaghan iyo David Duchovny.
Wax kastoo sixir Blumhouse conjured for Farshaxanka, waa wax aan hubaashii rajaynayo.
Maxaad u maleyneysaa ragga Ku faraxsanahay dib u bilaabista? Ku faraxsan dib u eegista Farshaxanka? Noo soo sheeg qaybta faallooyinka.
Sawirada 'Jimcaha 13-keeda' waxay daaha ka qaadayaan sida uu u ekaan lahaa Jason taxanaha CW
Argagixisada Tightwad Talaadada - Filimo Bilaash ah oo loogu talagalay 2-18-20